Kedu ihe ndekọ oge ịgba elekere 1 nke ugbu a? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Bradley wiggins hour ndekọ - ngwọta na-adịgide adịgide
Bradley wiggins hour ndekọ - ngwọta na-adịgide adịgide
Kedu ihe ndekọ oge ịgba elekere 1 nke ugbu a?
Oyigbo 55.089 km
Otu n'ime ihe ndekọ kachasị ama ama na ịgba ịnyịnya bụ ihe ndekọ oge awa, nke kachasị anya ị nwere ike ịnya n'ime otu elekere Victor Campernauts na-ejide ndekọ oge awa ndị nwoke, mana kedu maka anyị ndị ọzọ, anyị enweghị ike ịgbazite velodrome, ego na-adịghị agwụ agwụ na-etinye na nyocha nke ikuku windo na gia ya mere m mere ntakịrị nyocha ma chọpụta na nke a bụ ndekọ oge ụwa na ndị na-agba ịnyịnya ígwè, kwenye ya ma ọ bụ na ọ bụghị, bụ ndekọ Guinness nke ụwa na m hụrụ ezigbo ihe ịma aka n'anya ka m wee nwee ájá kacha mma ndị rollers ahụ wee hụ ihe m nwere Ihe ndekọ ụwa ugbu a banyere rollers bụ Leonardo Saponaro si Italytali na-ejide ya ma ọ nọ ọdụ na 57.1 kilomita na nke a bụ igwe kwụ otu ebe m ga-ewere na ihe ịma aka taa, m Pinarello F12 na m jiri nlezianya nwee akụkụ ụfọdụ m nwere ọtụtụ isiokwu na-akọwa akụkụ niile ndị a na-ede. Nke kachasị, ihe ndekọ ụwa anyị bụ na ịnwere ike ịnwale ya n'ụlọ, ọ baghị uru ọ bụla ihe nhazi ime ụlọ ị nwere, naanị gbalịa ma hụ etu ị ga - esi gaa n'otu elekere ma kesaa anyị n'ihe ndị a n'okpuru na otu m ga-esi laghachi na nnwale m na agbanyeghị, ma emegoro m nyocha ma m setịpụrụ onwe m ihe mgbaru ọsọ nke 60 kilomita nke bụ 2.83 kilomita dị elu karịa ndekọ dị ugbu a ma enwere m ule ole na ole na-agba ọsọ n'ụzọ ziri ezi mana naanị maka nkeji 30 ka m ga-anya ụgbọala ugboro abụọ dịka ogologo ọsọ a taa ka mkpịsị aka gị gafere m enwere m ihe niile nọ ebe ịdekọ ma gosipụta mbọ m.
atụmatụ ọzụzụ ịgba ígwè
M ga - eji isi okwu Wahoo abuo dekọọ data niile m chọrọ na ihe niile fọdụrụ bụ imecha ọkụ m ma hụ na m dị njikere maka awa mgbu. Emechaala m ihe m na-eme, m dịkwa njikere ịga. Ugbu a naanị ihe na-efu bụ ego a ga-agụta m, ụmụ okorobịa, ise, anọ, atọ, abụọ, otu, ka anyị gaa, anyị abanyela maka nkeji iri na ise wee ruo ugbua ije ije na-ekwe nkwa.
Agabigala oge m nke a na-ekwe nkwa, mana ihe na-ekpo ọkụ ka m na-enweta, ka ọ na-arịkwu ntị m ntị ka ị wee rapara ma nwee olile anya nke kachasị mma, ntakịrị oge karịa 30 nkeji na nsogbu a ebe a ma ọ bụ oge dị mma Achọpụtara m bụ na obi m malitere gburugburu akara 150 ka anyị nọ ugbu a na mmalite 160s ebe ụkwụ m ga-ada mbà, enwere m ike na ọkụ na ahụ m ga-arụsi ọrụ ike ka m nọdụ ala na ndagide cadence nke a otu narị RPM, nke na-agwụ ike ugbu a, mana anyị agafela ọkara anya wee mee ka mkpịsị aka gị gafere, anyị gafere obere nkeji 50 ugbu a, nke pụtara na o rughị nkeji 10, ọ na-esiwanye ike, obi m na-agbadata n'ihi na m na-ekpo ọkụ ugbu a na anyị nọ na 170s, mana ụfọdụ ozi ọma mebiri ndekọ dị ugbu a, nke bụ ntakịrị ntakịrị enwere ike ịsụ ude m, mana n'oge fọdụrụ m ga-enweta m gbadaa ala ma bulie efere a ka o kwere mee, ya mere kpachie mkpịsị aka gị, ọ dịghị onye nwere ike izu ya, mana echere m Naanị m ga-egwu ala insuper r siri ike, ugbu a anyị nọ n'okpuru nkeji asaa ma ana m enwekwu obi ike ka m wee gbalịsie ike. Emeela m ka m mara ihe na 110 RPM ma obi m dị ugbu a bụ 175 na agaghị m agha ụgha na m na-amalite ịta ahụhụ mana maka ndị na-ahụ ihe anyị ga-aga n'ihu ma hụ ihe anyị nwere ike ime, anyị nọ 182 na-eti oge ọ bụla, oge nke 112 rpm na ọsọ dị ugbu a nke 78 kilomita kwa elekere, nke ọma karịa usoro ndekọ ma ọ na-emetụta m ugbu a. Anọ m na nkeji atọ gara aga ma ugbu a aghaghị m gaa n'ihu ma rụsie ọrụ ike na mụ onwe m maka itinye aka na obere mbọ ọ bụla Ọ bụ ya mere anyị ji etinye nrụgide na nke a na-echetara m ka m bụrụ onye na-agba ịnyịnya ígwè ọzọ, obere mbọ ọ bụla gụrụ maka sekọnd 30 gara aga, yabụ m ga-agba gburugburu it off with an hour184 beats per minute 120 rpm 10 9 8 asaa isii ise ise anọ na atọ na otu na a lap oh my god gotta keep pedaling oh my god that was siri ike m jidere nwanne m nwoke wee nweta m e bugoro na nke ọma ozi ọma na m setịpụrụ ndekọ ụwa ọhụrụ nke a na-ekwenyebeghị ma ọ bụ kilomita 74.3 ma aga m agwa gị ihe masịrị m nke ọma na Obi dị m ezigbo ụtọ ebe a ọ na-eju anya ọ bụghị na ọ bụ otu awa ma anyị nwere nkezi obi nke 158 kwaa kwa nkeji, ọnụọgụ kachasị nke 185 gbagoro, nkeji nkeji cadence 100 rpm, kachasị cadence121 na anyị nwere nkezi ọsọ nke Kilomita 74.3, mana nke kachasị mma bụ ọsọ ọsọ kachasị na njedebe mgbe m na-anya 84.3 kilomita kwa elekere, mara mma ọsọ ọsọ, nke ahụ bụ ndekọ ụwa nke ndị rollers mere ma gbaa ntụ ma ọ na-adị ụdị ihe na-adịghị mma iche na m bụ nyochawa a ụwa ndekọ njide m obi ụtọ banyere na Nke ahụ bụ n'ezie.
Ugbu a, ịchọrọ akwụkwọ na ihe akaebe nke ndị ọrụ Guinness World Record iji nyochaa ndekọ a. Olileanya na nke a sitere n'ike mmụọ nsọ nye gị ịnwale ya n'ụlọ gịnị kpatara na ịghara ime ka anyị mara na nkọwa dị n'okpuru ebe ị nwere ike ịga n'otu awa. Ugbu a, ihe niile m ga-eme bụ iwepụ ihe ndị a na ọsụsọ na ịsa ahụ ma kwadebe maka isiokwu gcm na-esote.
Onye na-ejide ndekọ oge elekere?
Nandekọn'ihi na anya dịkarịa ala kpuchien’ime otu awanke Victor Campenaerts nke Belgium nwere ugbu a bụ onye setịpụrụ akara nke 55.089 kilomita na 16 Eprel 2019 na Agusascalientes (Mexico).10 nke 2020bọchị 2020
Kedu oge kachasị ọsọ e dekọrọ n'igwe?
Kedu watts ole bụ onye na-agba ịnyịnya Olympic?
Na Sọnde Septemba 16, 2018, Denise Mueller-Korenek mebiriigweọsọ alandekọnke 167 mph, na-akụ 183.932 mph na Utah's Bonneville Salt Flats.Septemba 17 2018
Egwuregwu ole na ole na-anwale oke ndị egwuregwu gbara agba dị ka ịgba ígwè. Ọ bụ iyi egwu iwe. Mana ọ bụghị naanị ntachi obi mmadụ na ịgba ọsọ ahụ na-enye usoro maka ihe ịga nke ọma, kamakwa amamihe mmadụ.
Ọ bụ igwe kacha ọsọ ọsọ n’ụwa. N'egwuregwu kachasị elu, ọdịiche dị n'etiti ihe ịga nke ọma na ọdịda na-abụkarị ọdịiche kachasị nta. Ogige maka otu n'ime ndị egwuregwu kachasị nwee mmeri na egwuregwu ụwa.
Ndị ọgba tum tum Britain agbaala n’elu tebulu nrite n’egwuregwu Olimpik atọ gara aga, ọ bụkwa otu egwuregwu na-eme ndị mmeri. Anyị chọrọ ịbụ ndị kachasị ọsọ n'ụwa, anyị achọghị. Naanị anyị chọrọ mmeri na asọmpi Olympic, anyị chọrọ mmeri n'oge kachasị ọsọ.
N'egwuregwu ebe agbụrụ 1/1000 kpebiri nke agbụrụ, Emily na ndị otu ya na-eche otu ihe: uru dị ntakịrị. Obere ibido ọkara ọkara ga-amalite ụbọchị ahụ. Tinye nrụgide.
Otu n'ime ebe kachasị mma ịchọta obere leeway dị na igwe kwụ otu ebe. Nwoke isi na otu maka nke a bu onye okacha amara na onye mbu Formula 1 engineer. Ọrụ m bụ naanị itinye teknụzụ na injinia na onye ọ bụla m nwere ike iji amamihe mee ka ndị otu ahụ mee ngwa ngwa.
Prọfesọ Injinia Mahadum Cambridge, Tony Purnell, mepụtara ịnyịnya ígwè T5GB a ma ama na onye nrụpụta Cérvelo. Site na mbenata oke ịdọrọ, ọ nyeere ndị otu Britain aka ịnụ ụtọ asọmpi Olympic ha gara nke ọma. Ọ bụ igwe kacha ọsọ ọsọ n’ụwa.
Otu esi ewukwasị okpukpu carbon ndị a na-eme ka igwe dị ọkụ ma sie ike na-enweghị ịchụ àjà aerodynamics, nnukwu isi millisecond ebipụla site na obere mgbanwe mgbanwe, ọbụlagodi n'ahịrị, nke ike ị na-emepụta na-esite na esemokwu furu efu na agbụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike belata ọnwụ ahụ, ọ pụtara na onye na-eme egwuregwu nwere ume siri ike mere ka ọdịiche dị na egwuregwu dị n'etiti ọla ọcha na ọla edo. Aerodynamic izu oke na-agwụ ike na-achụ bụghị naanị na igwe kwụ otu ebe, kamakwa na onye na ya.
Ọnọdụ onye ọkwọ ụgbọala ahụ nwere ike ime ihe niile dị iche. Na-ebute oge ọ bụla, ọ bụ sekọnd 45 ka ọ gachara mgbe kilomita 40 gachara. Na 1996 onye mmeri Olympic Chris Boardman mebiri ndekọ ụwa otu awa.
Mgbe Boardman nọ n'ọkwa Superman, ogwe aka gbatịrị n'ihu isi ya maka ikuku ikuku dị nro. Site n’idozi ụzọ ya dị ka dike. Taa, ihe nketa a na-adịgide na statelọ Ọrụ Ọkachamara Boardman na Evesham, England.
Ngwongwo igwe kwụ otu ebe nwere ike inye aka, mana anyị na-ahụ na ọtụtụ ihe ikuku na draịsị sitere n'aka onye na-agba ya n'onwe ya. Nọdụ ala, gwa m ntakịrị ihe banyere ụzọ anyị chọrọ ịga, ihe anyị chọrọ ịhụ. Taa, Jamie na-enyere onye ọkpọ ọkpọ ọkpọ Dan Bigham aka ịchọpụta ezigbo ọnọdụ ya maka ndị na-abịa ịchụso agbụrụ.
N'ime oghere ikuku, Dan na-agba ọsọ ifufe karịrị 60 km / h iji mezie ọnọdụ ikuku ikuku ọ ga-ekpughere na egwu ahụ. Arụ ọrụ ya, na n'ikpeazụ ihe ịga nke ọma ya, nwere ike ịdabere na usoro nke mgbanwe ndị fọrọ nke nta ka ọ ghara ịghọta ọnọdụ ya na igwe kwụ otu ebe. Odi mma Dan, ka anyi mee mgbanwe mbu anyi, anyi g’eme nke a n’oge na adighi anya.
Ka anyi megharia aka anyi, biko anyi kwugharia aka ya ntakịrị wee dozie. Ọ bụrụ na anya dị n’etiti ha bụ naanị millimita, Dan na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke abụọ kwa kilomita. Anyị na-akwọ ụgbọala ndekọ ụwa ebe a, kwesịrị ya.
lebron james igwe kwụ otu ebe
Bịa n'ụbọchị agbụrụ, mgbanwe aghụghọ dị ka ndị a nwere ike ịba uru dị ukwuu maka ndị otu Dan. Onwe m, m na-agbanye ihe dị ka 4/10 ọsọ ọsọ, naanị mgbe ọ bụ oge nke m, ma ọ bụrụ na mmeri ahụ bụ maka onye ọ bụla nọ na otu ahụ, mgbe ahụ anyị bụ ngụkọta nke otu na ọkara na sekọnd abụọ ngwa ngwa. Egwu emebiwo aha nke ịgba ígwè.
Mana nchụso ya nke ezigbo uru dị n'akụkụ akwụkwọ ka na-akwado ụzọ maka ọtụtụ usoro ọzụzụ ndị ọzọ. Ndị Britain kacha agba ịnyịnya ígwè na ụwa na-eche asọmpi na-arịwanye elu site na ndị na-asọ mpi bụ ndị na-adị ngwa ịmụ otu esi ewepụta ihe ọhụrụ, na ịchụso uru dị oke ala na-adị oke oke.
Gịnị bụ Lance Armstrong's FTP?
Lance Armstrongkwuru na ọ na-enwe ike iwepụta 495 watts maka 30-40 nkeji.Ọgọst 7 2020
300 watts dị mma ịgba ígwè?
Ọtụtụ prondị na-agba ígwèmepụta ihe dị ka 200 ka300 wattsná nkezi, n'oge njem elekere anọ. “Nke ahụ bụ iheukwubanyerewattage. Ọ na-ewepụta mgbanwe niile, ”Pennino na-ekwu. Ọ kọwara, sị: “Ọ bụrụ na ị na-azụzi obi gị, mgbe ike gwụrụ gị, mgbe mmiri gwụrụ gị ma ọ bụ mgbe ị na-arịa ọrịa, ọnụọgụgụ gị dị iche.Ọnwa Isii 28. 2015
ụzọ ịnyịnya ígwè dị m nso
Kedu ọsọ ọsọ Bradley Wiggins na-agba?
Wigginsmerie oge nke 19 nkeji 44 sekọnd - naanị ịhapụ ndekọ Britain n'oge ahụ. Kedu ihe kpatara enweghị ụmụ nwanyị Tour de France?Jul 21 2018 Nov.
Kedu ụdị ọsọ onye na-agba ịnyịnya ibu na-aga?
Iji nye gị echiche nke ịdị anya naososo, nkeziịgba ịnyịnya ígwèmaka ambido bubanyere 12mph. Nke a pụtara na n’izu mbụ gị, ị ga - ekpoli ihe ruru kilomita abụọ. Mgbe izu asatọ gasịrị, njem 10-mile ekwesịghị inwe mmetụta na-agwụ ike ma ọlị.
Kedu onye kacha agba ọsọ n’ụwa?
Ihe ndekọ 100m nke Usain Bolt dere
N'ebe ihe ndekọ ahụ na-emeri, Usain Bolt na-agba ọsọ ọsọ ọsọ bụ 37.58km / h, ebe ọ na-eru ọsọ ọsọ nke 44.72km / h na 60-80m agbatị - nọmba dabara adaba makaụwa kasịNwoke. A na-ewere onye na-agba ọsọ Jamaica Usain Bolt dị kakasịnwoke na mbara ala.12.10.2020
Kedu onye na-agba igwe igwe ọsọ ọsọ ọsọ n'ụwa?
Na Sọnde, Septemba 16, Denise Mueller-Korenek kụrụkasịọsọ mgbe site aonye na-agba ígwè, na-esetịpụrụ ọhụrụụwandekọ nke 183.932 kilomita kwa awa. O kpebiri oge na Utah's Bonneville Salt Flats mgbe ọ na-edegharị n'azụ draịva dabara adaba nke onye ọkwọ ụgbọ ala ọkachamara Shea Holbrook na-agba.25.09.2018
Olee otú ọtụtụ ndị watt Bradley Wiggins nkezi kwa mile?
Onye Britain na-agba ịnyịnya ígwè Bradley Wiggins, onye, ​​na 2015, na-akwụ ụgwọ 54.526 kilomita (33.881 kilomita) iji debe ndekọ nke ụmụ nwoke ugbu a, e mere atụmatụ na ọ ruru 440 watts. Ọ bụrụ n ’ị na-elebara ọnụ ọgụgụ gị anya mgbe ị na-atụgharị ya, ọnụ ọgụgụ ndị ahụ ga-eju gị anya.
Afọ ole ka Bradley Wiggins dị mgbe ọ meriri n'ọsọ egwuregwu ụwa mbụ ya?
Ọganihu ya bịara na June 1998, na-emeri onye ọ bụla na-agbaso kilomita atọ na asọmpi nke ụwa na Cuba, afọ 18. N'izu na-eso ya, ọ jigidere aha ya na asọmpi egwuregwu nke obere mba na Manchester.
Kedu mgbe Bradley Wiggins lara ezumike nká ịgba ígwè?
Na 2016, o meriri na mmeri ndi ozo na madison, na ọla edo na ndi otu a na-acho n'egwuregwu Olimpik, nke mbu nke mmeri ya nke ise na Games. Ọ lara ezumike nká n'ụdị ịgba ígwè ọrụ ọ bụla na 28 Disemba 2016. Wiggins ka enyere CBE na 2009.